Ozi Ozi Dị Mkpa - IntegritySyndicate.com
Mbido Edemede Okwukwe Oziọma dị mkpa
Ịghọta isi ihe nile dị mkpa nke Ozi -ọma
Ozi -ọma nke ala -eze Chineke
Mbilite n'ọnwụ nke ndị ezi omume na ndị ajọ omume
Jizọs bụ Kraịst (Mesaya)
Jizọs, Nwa nke Mmadụ nke e buru n'amụma
Onye Chineke họpụtara ka anyị gee ntị
Jizọs nwụrụ maka mmehie anyị
Oziọma nke a na -eji azọpụta anyị
Ikpe sitere na Kraịst, Onye -ogbugbo nke Chineke
Chegharịa ma kwere Oziọma ahụ
Jọn Baptist gara na-ekwusa baptizim nke nchegharị maka mgbaghara mmehie. ( Luk 3:3 ) Ọ dọrọ aka ná ntị banyere ọnụma Chineke nke na-abịa, na-asị: “Ọbụna ugbu a anyụike atọworị mgbọrọgwụ osisi. Ya mere, a na-egbutu osisi ọ bụla nke na-adịghị amị ezi mkpụrụ, tụba ya n’ọkụ.” ( Luk 3:7-9 ) Ọ gbaara àmà banyere Kraịst ahụ nke gaje iji Mmụọ Nsọ na ọkụ mee baptizim, na-asị: “ ndụdụ nfụcha ya dị n’aka ya, iji kpochaa ebe nzọcha mkpụrụ ya na ikpokọta ọka n’ọba ya, ma ọ ga-eji ọkụ a na-apụghị imenyụ emenyụ rechapụ igbogbo ọka.” ( Luk 3:16-17 ) Mgbe Nwa nke mmadụ ga-abịa n’ebube ya, ya na ndị mmụọ ozi niile, mgbe ahụ ọ ga-anọkwasị n’ocheeze ya dị ebube. ( Mat. 25:31 ) A ga-achịkọta mba niile n’ihu ya, ọ ga-ekewapụkwa ndị mmadụ n’ebe ibe ha nọ dị ka onye ọzụzụ atụrụ si ekewapụ atụrụ na ewu. (Matiu 25:32) Ọ ga-edebe atụrụ n’aka nri ya, ma ewu n’aka ekpe—Eze ahụ ga-asịkwa ndị nọ n’aka nri ya, ‘Bịanụ, ndị Nna m gọziri agọzi, ketanụ alaeze ahụ a kwadebere unu. site na ntọ-ala nke uwa. ( Mat 25:33-34 ) Ọ ga-asị ndị nọ n’aka ekpe ya, ‘Si n’ebe m nọ pụọ, unu a bụrụ ọnụ, banye n’ọkụ ebighị ebi e dobere ekwensu na ndị mmụọ ozi ya.’ (Matiu 25:41) Ndị ajọ omume ga-agaba n’ime ntaramahụhụ ebighị ebi, ma ndị ezi omume ga-aba na ndụ ebighị ebi. (Matiu 25:46)
Jisus bia na Galili, nēzisa ozi ọma nke Chineke, si, Oge ahu eruwo, ala-eze Chineke di kwa nso; chegharịa ma kwere ozi ọma.” ( Mak 1:14-15 ) Ọ gara kwusaa ozi ọma nke alaeze Chineke n’obodo dị iche iche, n’ihi na e zitere ya maka nke a. ( Luk 4:43 ) Ọ gafere n’obodo ukwu na obodo nta, na-ekwusa ma na-ezisa ozi ọma nke alaeze Chineke. ( Luk 8:1 ) Ọ sịrị: “Iwu ahụ na ndị amụma dịruo ruo mgbe Jọn; ebe ọ bụ na a na-ekwusa ozi ọma nke alaeze Chineke, onye ọ bụla na-amanyekwa ike ịbanye na ya.” ( Luk 16:16 ) Ndịozi Kraịst kwusara ozi ọma banyere alaeze Chineke na aha Jizọs Kraịst na-eme ma ndị ikom ma ndị inyom baptizim n’aha Jizọs. ( Ọrụ 8:12 ) N’ilu banyere ịgha mkpụrụ, Jizọs kọwara na onye na-agha mkpụrụ ọma bụ Nwa nke mmadụ, ubi ahụ bụ ụwa, ezi mkpụrụ ahụ bụ ụmụ nke alaeze, ata ahụ bụkwa ụmụ. nke ajọ onye. ( Mat 13:36-38 ) Owuwe ihe ubi bụ ọgwụgwụ nke oge a. (Mat. 13:39) Dị nnọọ ka a na-achịkọta ata ma gbaa ọkụ, otú ahụ ka ọ ga-adịkwa n’ọgwụgwụ ụwa—a ga-ebibi ndị ajọ omume n’oké ọkụ, ma ndị ezi omume ga-enwu dị ka anyanwụ n’alaeze nke ụwa. Nna ha. (Matiu 13:41-43)
Ugbu a ọrụ nke anụ ahụ pụtara ìhè: ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ mmekọahụ, ikpere arụsị, mgbaasị, iro, esemokwu, ekworo, iwe ọkụ, esemokwu, esemokwu, nkewa, anyaụfụ, ịrunụbiga mmanya ókè, ịkwa iko, na ihe ndị a - ndị na -eme ụdị ihe a agaghị eketa alaeze Chineke (Gal 5: 19-21) Mana mkpụrụ nke mmụọ bụ ịhụnanya, ọ joyụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye; megide ihe ndị dị otu a, enweghị iwu ọbụla. (Gal 5: 22-24) N'ihi na ị nwere ike mara nke a, na onye ọ bụla nke na-akwa iko ma ọ bụ na-adịghị ọcha, ma ọ bụ onye nwere anyaukwu (ya bụ, onye na-ekpere arụsị), enweghị ihe nketa n'alaeze nke Kraịst na Chineke. (Ndị Efesọs 5: 5) Ekwela ka onye ọ bụla jiri okwu efu duhie gị, n'ihi na n'ihi ihe ndị a iwe Chineke na -abịakwasị ụmụ nnupụisi. (Ndị Efesọs 5: 6)
Anyị na -ekele Nna, onye mere ka anyị ruo oke ikere òkè n'ihe nketa nke ndị nsọ n'ìhè. (Kọl 1:12) Ọ napụtara anyị n'ọchịchịrị wee nyefee anyị n'alaeze nke Ọkpara ya ọ hụrụ n'anya, onye anyị nwere mgbapụta n'ime ya, mgbaghara mmehie. (Ndị Kọlọsi 1: 13-14) Gaa onye nzọpụta anyị, na-achọ ka a zọpụta mmadụ niile na ka ha bịa mara eziokwu ahụ: N'ihi na otu Chineke dị, otu onye ogbugbo dịkwa n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Kraịst Jizọs, onye nyere onwe ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka mmadụ niile. (1Tim 2: 3-6) O jiri ọbara ya gbapụta anyị na mmehie anyị wee mee anyị alaeze, ndị nchụàjà nye Chineke na Nna ya. Jizọs Kraịst bụ onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi, ọkpara nke ndị nwụrụ anwụ, na onye na -achị ndị eze n'ụwa (Mkpu 1: 5) Ọ nwụrụ ma dị ndụ ruo mgbe ebighi ebi ma nwee mkpịsị ugodi ọnwụ na Hedis (Mkpu 1:18)
Luk 3:3 (NLT)
3 O we ba n'ógbè nile di Jọdan buruburu, ikwusa baptism nke nchegharị maka mgbaghara nmehie.
(Gụọ Luk 3: 7-9.)
7 Ya mere, ọ sịrị igwe mmadụ ndị bịara ka o mee ya baptizim, “Ụmụ ajụala! Onye dọrọ gị aka na ntị ka ị gbalaga site n'iwe na -abịa? 8 Mia nkpuru dika nchèghari si di. Unu amalitekwala ịsị n'obi unu, 'Anyị nwere Abraham dị ka nna anyị.' N'ihi na asim unu, na Chineke puru ime ka umu tolitere site na nkume ndị a. 9 Ọbuná ub theu a anātukwasi anyu -ike na nkpọrọgwu osisi nile. Ya mere osisi ọ bụla nke na -adịghị amị ezi mkpụrụ na -egbutu tụba ya n'ime ọkụ. "
(Gụọ Luk 3: 16-17.)
16 Jọn zara ha niile, sị, “Eji m mmiri mee unu baptizim, mana onye ahụ dị ike karịa m na -abịa, eriri akpụkpọ ụkwụ onye m na -erughị eru ịtọpụ ya. Ọ ga -eji mmụọ nsọ na ọkụ mee unu baptizim. 17 Ihe o ji afụcha ihe dị n'aka ya, iji kpochapụ ebe nzọcha mkpụrụ ya na ịchịkọta ọka ya n'ọba ya, mana ọ ga -eji ọkụ na -adịghị anyụ anyụ gbaa igbogbo ya.. "
Matiu 25: 31-34
31 "Mgbe Nwa nke mmadụ ga -abịa n'ebube ya, ya na ndị mmụọ ozi niile, mgbe ahụ ọ ga -anọkwasị n'ocheeze ya dị ebube. 32 A ga -achịkọta mba niile n'ihu ya, ọ ga -ekewakwa ndị mmadụ na ibe ha dị ka onye ọzụzụ atụrụ si ekewapụ atụrụ na ewu. 33 Ọ ga -edebe atụrụ n’aka nri ya, ma debe ewu n’aka ekpe ya. 34 Mgbe ahụ, Eze ahụ ga -asị ndị nọ n'aka nri ya, 'Bịanụ, ndị Nna m gọziri agọzi, ketanụ alaeze akwadoro unu site na ntọala ụwa..
Matiu 25:41 (NLT)
41 "Mgbe ahụ ọ ga -asị ndị nọ n'aka ekpe ya, 'Si n'ebe m nọ pụọ, unu ndị a bụrụ ọnụ, n'ime ọkụ ebighi ebi edoziri maka ekwensu na ndị mmụọ ozi ya..
Matiu 25:46 (NLT)
46 Ndị a ga -apụ baa na ntaramahụhụ ebighị ebi, ma ndị ezi omume ga -aba na ndụ ebighi ebi. "
(Mak 1: 14-15)
14 Ma mgbe ejidechara Jọn, Jizọs batara na Galili, na -ekwusa ozi ọma nke Chineke, 15 na -asị, “Oge ahụ ezuola, alaeze Chineke dịkwa nso; chegharịa ma kwere na ozi -ọma. "
Luk 4:43 (NLT)
43 mana ọ sịrị ha, "Aghaghịkwa m izisara obodo ndị ọzọ ozi ọma alaeze Chineke; n'ihi na ezitere m maka nke a. "
Luk 8:1 (NLT)
1 N'oge na -adịghị anya, ọ gafere n'obodo ukwu na obodo nta. na -ekwusa ma na -eweta ozi ọma alaeze Chineke. Mmadụ iri na abụọ ahụ sokwa ya
16 "Tya Iwu na ndị amụma nọ ruo n'oge Jọn; kemgbe ahụ a na -ekwusa ozi ọma alaeze Chineke, onye ọ bụla na -amanye ịbanye na ya.
Ọrụ Ndị Ozi 8: 12 (NIV)
12 Ma mgbe ha kwenyere Filip dịka o kwusara ozi -ọma gbasara ala -eze Chineke na aha Jisus Kraịst, e mere ha baptism, ma ndị nwoke ma ndị nwanyị.
Matiu 13: 36-43
36 Mgbe ahụ ọ hapụrụ igwe mmadụ ahụ wee banye n'ime ụlọ. Ndị na -eso ụzọ ya bịakwutere ya, sị, “Kọwaara anyị ilu ilu ata.” 37 Ọ zara, "Onye kụrụ ezi mkpụrụ bụ Nwa nke mmadụ. 38 Ubi ahụ bụ ụwa, ezi mkpụrụ ahụ bụkwa ụmụ nke alaeze. Ahịhịa bụ ụmụ ajọ onye ahụ, 39 onye iro nke kụrụ ha bụ ekwensu. Owuwe ihe ubi bụ njedebe nke afọ, ndị na -ewe ihe ubi bụ ndị mmụọ ozi. 40 Dị nnọọ ka a na -achịkọta ata ma kpọọ ya ọkụ, otú ahụ ka ọ ga -adị n'ọgwụgwụ afọ. 41 Nwa nke mmadụ ga-ezipụ ndị mmụọ ozi ya, ha ga-esikwa n'alaeze ya chịkọta ihe niile na-akpata mmehie na ndị na-emebi iwu., 42 tụbakwa ha n’oké ọkụ. N'ebe ahụ ka ịkwa akwa na ịta ikikere ezé ga -adị. 43 Mgbe ahụ ndị ezi omume ga na -enwu dị ka anyanwụ n'alaeze nke Nna ha. Onye nwere ntị, ya nụrụ.
Ndị Galetia 5: 18-24
18 Ma ọ bụrụ na mmụọ nsọ na -edu unu, unu anọghị n'okpuru iwu. 19 Ugbu a ọrụ nke anụ ahụ pụtara ìhè: ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ mmekọahụ, 20 ikpere arụsị, ịgba afa, ibu iro, esemokwu, ekworo, iwe ọkụ, ịma aka, esemokwu, nkewa, 21 anyaụfụ, mmanya, mmanya, na ihe ndị dị ka ndị a. Ana m adọ gị aka na ntị, dịka m dọrọ gị aka na ntị na mbụ, na ndị na -eme ụdị ihe a agaghị eketa alaeze Chineke. 22 Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, 23 ịdị nwayọọ, njide onwe onye; ọ dịghị iwu na -emegide ihe ndị dị otú a. 24 Ma ndi nke Kraist Jisus kpogidere anu -aru n'obe, ya na agu ihe ọjọ nile ya.
Ndị Kọlọsi 1: 12-14
12 n givingkele Nna, Onye mere ka I tozue ikere òkè n'ihe -nketa ndi nsọ n'ìhè. 13 Ọ napụtara anyị n'ọchịchịrị ma nyefee anyị na alaeze nke Ọkpara ọ hụrụ n'anya, 14 Onye anyị nwere mgbapụta n'ime Ya, bụ mgbaghara mmehie.
1 Timoti 2: 3-6 (NIV)
3 Nke a dị mma, ọ dịkwa mma n'anya Chineke Onye Nzọpụta anyị, 4 onye chọrọ ka a zọpụta mmadụ niile na ka ha bịarute n'ọmụma nke eziokwu. 5 N'ihi na otu Chineke dị, otu onye ogbugbo dịkwa n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Kraịst Jizọs, 6 onye nyere onwe ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka mmadụ niile, nke bụ akaebe a na -enye n'oge ya.
5 na site Jizọs Kraịst bụ onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi, ọkpara nke ndị nwụrụ anwụ, na onye na -achị ndị eze n'ụwa. Nke onye hụrụ anyị n'anya ma jiri ọbara ya mee ka anyị nwere onwe anyị pụọ na mmehie anyị
Mkpughe 1: 17-18
17 Mgbe m hụrụ ya, m dara n'ala n'ụkwụ ya dị ka onye nwụrụ anwụ. Ma o bikwasịrị m aka nri ya, sị, “Atụla egwu, Abụ m onye mbụ na onye ikpeazụ, 18 na nke dị ndụ. M nwụrụ, ma lee, m dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi, enwekwara m mkpịsị ugodi nke ọnwụ na Hedis.
Jesus ama enịm ke mme akpan̄kpa ẹyeset. (Mak 12: 24-25). O kwenyere na a ga -egbu ya ma n'ụbọchị nke atọ a ga -akpọlite ​​ya. (Luk 9:22) Ọ kuziri na n'ọgwụgwụ afọ a ọ ga -alọta ọzọ na -abịa n'igwe ojii n'ike na ebube na -ezipụ ndị mmụọ ozi ka ha si na ifufe anọ kpokọta ndị ọ họọrọ, site na nsọtụ ụwa ruo na nsọtụ ụwa. eluigwe. (Mak 13: 25-27) Jizọs kwuru, sị, “Ụmụ nke afọ a na-alụ nwunye, a na-enyekwa ha n'ọlụlụ, mana ndị a na-ewere dị ka ndị ruru eru iru afọ ahụ na mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ anaghị alụ nwunye, a dịghịkwa eke ha di, n’ihi na ha enweghị ike ịnwụ anwụ ọzọ, n’ihi na ha na ndị mmụọ ozi hà, ha bụkwa ụmụ Chineke, ebe ha bụ ụmụ mbilite n’ọnwụ. ” (Luk 20: 34-36)
Olileanya anyị nwere n’ebe Chineke nọ bụ na a ga-enwe mbilite n’ọnwụ nke ma ndị ezi omume na ndị ajọ omume ( Ọrụ 24:15 ) Jizọs sịrị: “Onye ọ bụla nke ga-azọpụta ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye ọ bụla nke tụfuru ndụ ya n’ihi m ga-achọta ya. N'ihi na gini ka ọ bara madu ma ọ buru na o rite uwa nile n'urù, we tufue nkpuru-obi-ya? Ma-ọbu gini ka madu gēnye n'ihi nkpuru-obi-ya? N'ihi na Nwa nke madu gābia, ya na ndi-mọ-ozi-Ya n'ebube nke Nna-Ya; ( Mat 16:26-27 ) N’ọgwụgwụ ụwa a, a ga-ekewapụ ihe ọjọọ ahụ n’ebe ndị ezi omume nọ ma tụba ha n’oké ọkụ. (Matiu 13:47-50)
(Mak 12: 24-25)
24 Jizọs sịrị ha, “Ọ́ bụghị nke a mere unu ji hie ụzọ, n'ihi na unu amaghị Akwụkwọ Nsọ ma ọ bụ ike nke Chineke? 25 n'ihi na mbe ha g fromsi na ndi nwuru anwu bilie, ha alughi nwunye, enyeghi kwa ha n'ọlulu, kama ha di ka ndi -mọ -ozi n'elu -igwe.
Luk 9:22 (NLT)
22 si, Nwa nke madu aghaghi ihu ọtutu ahuhu, ndi -okenye na ndi -isi -nchu -àjà na ndi -ode -akwukwọ gāju kwa Ya, na -egbu gị, na n'ụbọchị nke atọ kpọlite. "
(Mak 13: 26-27)
26 Mgbe ahụ ha ga -ahụ Nwa nke mmadụ ka ọ na -abịa n'igwe ojii jiri ike na ebube dị ukwuu. 27 Ma mgbe ahụ ọ ga -ezipụ ndị mmụọ ozi wee kpọkọta ndị ọ họpụtara site na ikuku anọ, site na nsọtụ ụwa ruo na nsọtụ eluigwe.
(Gụọ Luk 20: 34-36.)
34 Jisus we si ha, “Ụmụ nke afọ a na -alụ nwunye, a na -enyekwa ha di, 35 ma ndị ahụ e lere anya dị ka ndị ruru eru ịbịaru afọ ahụ na mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ anaghị alụ nwunye, a dịghịkwa eke ha di, 36 n'ihi na ha enweghị ike ịnwụ ọzọ, n'ihi na ha na ndị mmụọ ozi hà, ha bụkwa ụmụ Chineke, ebe ha bụ ụmụ mbilite n'ọnwụ.
Ọrụ Ndị Ozi 24: 15 (NIV)
15 nwere olile anya na Chineke, nke ndị a n'onwe ha nabatara, na a ga -enwe mbilite n'ọnwụ nke ma ndị ezi -omume ma ndị ajọọ -omume.
Matiu 16: 26-27
26 N'ihi na olee uru ọ ga -abara mmadụ ma ọ bụrụ na ọ nweta ụwa niile wee tụfuo mkpụrụ obi ya? Ma ọ bụ gịnị ka mmadụ ga -enye n'ọnọdụ mkpụrụ obi ya? 27 N'ihi na Nwa nke mmadụ ga -abịa na ndị mmụọ ozi ya n'ebube nke Nna ya, mgbe ahụ ọ ga -akwụ onye ọ bụla ụgwọ dị ka ọrụ ya si dị..
Matiu 13: 47-50
47 Ọzọ kwa, ala -eze elu -igwe yiri ub thatu a tubàra n'oké osimiri, nke kpokọta -kwa -rari azù di iche iche. 48 Mgbe o juru, ndị mmadụ dọpụtara ya n'ikpere mmiri wee nọdụ ala na -ekesa ihe ndị dị mma n'ime arịa ma tụfuo ihe ndị na -adịghị mma. 49 Otu a ka ọ ga -adị na ngwụcha afọ. Ndị mmụọ ozi ga -apụta wee kewapụ ihe ọjọọ na ndị ezi omume 50 tụbakwa ha n’oké ọkụ. N'ebe ahụ ka ịkwa akwa na ịta ikikere ezé ga -adị.
Ozi ọma nke ọṅụ bụ na a mụrụ onye nzọpụta, onye bụ Kraịst Onyenwe anyị. ( Luk 2:10-11 ) Jizọs gwara nwaanyị ahụ nọ n’olulu mmiri, sị: “Oge awa na-abịa, ọ bụkwa ugbu a mgbe ndị na-efe ezi ofufe ga-efe Nna m n’ime mmụọ na n’eziokwu.” (Jọn 4:23) Nwaanyị ahụ sịrị ya: “Amaara m na Mesaya na-abịa (Onye a na-akpọ Kraịst) mgbe ọ ga-abịa, ọ ga-agwa anyị ihe niile.” ( Jọn 4:25 ) Jizọs sịrị ya: “Mụ onwe m onye na-agwa gị okwu bụ ya.” (John 4:26) The nkpughe nke Peter na "Jizọs bụ Kraịst, Ọkpara nke Chineke dị ndụ," bụ mkpughe na chọọchị bụ tọrọ ntọala ya n'elu. ( Mat 16:15-18 ) Jizọs gwara ndị Juu na ya bụ Kraịst, ha ekweghịkwa (Jọn 10:24-25) Mgbe ahụ, a kpọgidere ya n’obe n’ihi na ọ zọrọ na ya bụ Kraịst. ( Luk 23:1-3 ) E dere ozi ọma ndị ahụ ka anyị wee kwere na Jizọs bụ Kraịst (Mesaịa), Ọkpara Chineke, nakwa na site n’ikwere, anyị ga-enwe ndụ n’aha ya. (Jọn 20:31)
Mgbe emechara ka Jisọs si n'ọnwụ bilie, ndị ozi kwuputara na Chineke mere ya Onyenwe anyị na Kraịst, Jizọs nke a kpọgidere n'obe. (Ọrụ 2:36) Kwa ụbọchị, n'ụlọ nsọ na site n'ụlọ ruo n'ụlọ, ha akwụsịghị izi ihe na ikwusa na Kraịst bụ Jizọs. (Ọrụ 5:42) Mgbe Pọl onyeozi chegharịrị, ka ọ na -amụbawanye n'ike, ọ na -agbagwoju ndị Juu anya site n'igosi na Jizọs bụ Kraịst ahụ. (Ọrụ 9:22) O mechara banye n'ụlọ nzukọ wee tụgharịa uche site n'Akwụkwọ Nsọ, na -akọwa, na -egosikwa na ọ dị mkpa na Kraịst ga -ata ahụhụ ma si n'ọnwụ bilie, na -asị, "Jizọs a, onye m na -ekwusara gị. , bụ Kraịst. ” (Utom 17: 1-3) Ke ofụri ini utom ukwọrọikọ esie, Paul ama esịn idem ke ikọ oro, ọnọ mme Jew ntiense ete ke Christ edi Jesus. (Ọrụ 18: 5) O meghị ihe dị iche n'etiti ndị Juu na ndị mba ọzọ na -asị, "ọ bụrụ na ị ga -eji ọnụ gị kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị ma kwere n'obi gị na Chineke kpọlitere ya n'ọnwụ, a ga -azọpụta gị." (Ndị Rom 10: 9-12)
(Gụọ Luk 2: 10-11.)
10 Mọ -ozi ahu we si ha, Unu atula egwu; Ana m ewetara unu ozi ọma nke oke ọ joyụ nke ga -adịrị mmadụ niile. 11 N'ihi na Onye -nzọpụta ka amụrụ nye unu taa n'obodo Devid, onye bụ Kraịst Onyenwe anyị.
Jọn 4: 23-26
23 Ma, oge awa na-abịa, ma ugbu a, mgbe ndị na-efe ezi ofufe ga-efe Nna ahụ n'eziokwu na n'eziokwu, n'ihi na Nna ahụ na-achọ ndị dị otú ahụ ka ha fee ya ofufe. 24 Chineke bụ mmụọ, ndị na-efe ya aghaghị ife ofufe na mmụọ na n'eziokwu. " 25 Nwanyị ahụ sịrị ya, "Ama m na Mezaịa na -abịa (onye a na -akpọ Kraịst). Mgbe ọ bịara, ọ ga -agwa anyị ihe niile. ” 26 Jizọs sịrị ya, “Onye na -agwa gị okwu bụ ya.”
Matiu 16: 15-18
15 Ọ sịrị ha, “Ma onye ka unu na -asị na m bụ?” 16 Saịmọn Pita zara ya sị,Ị bụ Kraịst ahụ, Ọkpara nke Chineke dị ndụ. " 17 Jisus we za ya, si, Onye agọziri agọzi ka i bu, Simon Bar-Jonah! N'ihi na anụ ahụ na ọbara ekpugheghị gị nke a, kama Nna m nke bi n'eluigwe. 18 Ma asị m gị, ị bụ Pita, na nkume a ka m ga -ewu chọọchị m, ọnụ ụzọ ámá nke hel agaghị emeri ya.
Jọn 10: 24-25
24 Ya mere ndi -Ju nāb gathereda Ya buruburu, we si Ya, Rùe ole mb youe ka I g keepme ka ayi nọ n'obi abua? Ọ bụrụ na ị bụ Kraịst, gwa anyị hoo haa. " 25 Jizọs zara ha, “Agwara m unu, ma unu ekweghị. Ọrụ ndị m na -arụ n'aha Nna m na -agba àmà banyere m
Luk 23: 1-3
1 Nzukọ ndi ha nile we bilie, me ka ọ bia n'iru Pailat. 2 Ha we malite ibo Ya ebubo, si, Ayi huru nwoke a ka ọ nadingduhie mba -ayi, n forbidb usochi kwa ayi inye Siza ụtụ, na -ekwu na ya onwe ya bụ Kraịst, eze. " 3 Pailat we jua ya, si, Gì onwe -gi bu Eze ndi -Ju? AỌ zara ya, “I kwuru otu ahụ.”
31 ma ihe ndị a ka e dere ka unu wee kwere na Jisus bụ Kraịst ahụ, Ọkpara nke Chineke, na site na ikwere na unu ga -enwe ndụ n’aha ya.
Ọrụ Ndị Ozi 2: 36 (NIV)
36 Ya mere ka ulo Israel nile mara n'ezie na Chineke mere ya Onyenwe anyị na Kraịst, Jizọs a nke unu kpọgidere n'obe. "
Ọrụ Ndị Ozi 5: 42 (NIV)
42 Na kwa ụbọchị, n'ụlọ nsọ na site n'ụlọ ruo n'ụlọ, ha akwụsịghị izi ihe na ikwusa na Kraịst bụ Jizọs.
Ọrụ Ndị Ozi 9: 22 (NIV)
22 Ma Sọl nāga n'iru nādi ike, we me ka ihere me ndi -Ju ndi bi na Damaskọs site n'igosi na Jizọs bụ Kraịst ahụ.
Ọrụ 17: 1-3
1 Ma mb whene ha gabigasiri n'Amfipọlis na Apọlonia, ha biaruru Tesalọnaika, ebe ulo -nzukọ nke ndi -Ju di. 2 Pọl wee bata, dị ka ọ na -emekarị, wee soro ha tụgharịa uche n'akwụkwọ nsọ n'ụbọchị izu ike atọ, 3 na -akọwa ma na -egosi na ọ dị mkpa na Kraịst ga -ata ahụhụ ma si na ndị nwụrụ anwụ bilie, na -asị, “Jizọs a, onye m na -ekwusara gị, bụ Kraịst ahụ."
Ọrụ Ndị Ozi 18: 5 (NIV)
5 Mgbe Saịlas na Timoti si Masedonia bịa, Pọl ji okwu ahụ kpọrọ ihe. na -agbara ndị Juu àmà na Kraịst bụ Jizọs.
Ndị Rom 10: 9-12
9 n'ihi na, ọ buru na i were ọnu -gi kwuputa na Jisus bu Onye -nwe -ayi, kwere kwa n'obi -gi na Chineke mere ka O si na ndi nwuru anwu bilie, agāzọputa gi. 10 N'ihi na mmadụ na -eji obi ekwere ma na -agu ya n'onye ezi omume, ọnụ ka mmadụ na -eji ekwupụta wee zọpụta ya. 11 N'ihi na ihe e dere n'Akwụkwọ Nsọ na -ekwu, "Onye ọ bụla nke kwere na ya agaghị eme ihere." 12 N'ihi na ọ dịghị ihe dị iche n'etiti onye Juu na onye Grik; n'ihi na otu Onyenwe anyị ahụ bụ Onyenwe ihe niile, na -enye ndị niile na -akpọku ya akụ na ụba ya.
Jizọs weere ndị na -eso ụzọ ya iri na abụọ, sị ha, “Lee, anyị na -agbago Jerusalem, ihe niile e dere banyere Nwa nke Mmadụ site n'ọnụ ndị amụma ga -emezu; n'ihi na a ga -enyefe ya n'aka ndị mba ọzọ, a ga -akwakwa ya emo. e mesoro ya ihe ihere ma gbụọ ya ọnụ mmiri. Mgbe ha pịasịrị ya ihe, ha ga -egbu ya, n’ụbọchị nke atọ ọ ga -ebili. ” (Luk 18: 31-33) Ọ dị mkpa na Nwa nke mmadụ ga-ata ọtụtụ ahụhụ ma ndị okenye na ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ jụrụ ya, gbuo ya, a kpọlite ​​ya n'ụbọchị nke atọ. (Luk 9:22) Dịka Mozis weliri agwọ n'ọzara, ọ dị mkpa ka ebuli Nwa nke mmadụ elu, ka onye ọbụla kwere na ya wee nwee ndụ ebighi ebi. (Jọn 3: 14-15)
Oge awa na -abịa, ọ dịkwa ugbu a, mgbe ndị nwụrụ anwụ ga -anụ olu Ọkpara Chineke, ndị nụrụ ya ga -adịkwa ndụ. (Jọn 5:25) N'ihi na dị ka Nna ahụ nwere ndụ n'ime onwe ya, otu a ka o nyekwara Ọkpara ahụ inwe ndụ n'ime onwe ya. (Jọn 5:26) O nyewokwa ya ikike ikpe ikpe, n'ihi na ọ bụ Nwa nke mmadụ. (Jọn 5:27) Ka nke a ghara iju gị anya, n'ihi na oge na -abịa mgbe ndị niile nọ n'ili ga -anụ olu ya wee pụta, ndị mere ezi ihe ga mbilite n'ọnwụ nke ndụ, ndị mekwara ihe ọjọọ mbilite n'ọnwụ nke ikpe. (Jọn 5:28) Jizọs enweghị ike a n'onwe ya, ebe ọ na -anụ, ọ ga -ekpe ikpe, ikpe m ga -adịkwa mma, n'ihi na ọ chọghị uche nke ya kama ọ bụ uche onye zitere ya. (Jọn 5:28) Ọ gwụla ma ị kwere na Jizọs bụ Nwa nke mmadụ, ị ga -anwụ n'ime mmehie gị. (Jọn 8: 24-28)
(Gụọ Luk 18: 31-33.)
31 O we chiri madu iri na abua ahu, si ha,Le, ayi nārigoro Jerusalem, ihe nile edeworo n'akwukwọ bayere Nwa nke madu site n'aka ndi -amuma g beme kwa ya. 32 N'ihi na a ga -enyefe ya n'aka ndị mba ọzọ, a ga -akwakwa ya emo ma mee ya ihe ihere ma gbụọ ya ọnụ mmiri. 33 Mgbe ha pịasịrị ya ihe, ha ga -egbu ya, n’ụbọchị nke atọ ọ ga -ebili. ”
22 si, “Nwa nke madu aghaghi ihu ọtutu ahuhu, ndi -okenye na ndi -isi -nchu -àjà na ndi -ode -akwukwọ gāju kwa ya, ewe gbue ya, ka eme kwa ka o si n'ọnwu bilie n'ubọchi nke -atọ."
Jọn 3: 14-15
14 Dika Moses weliri agwọ n'ọhia, ọbuná otú a aghaghi iweli Nwa nke madu elu, 15 ka onye ọbụla kwere na ya wee nwee ndụ ebighi -ebi.
Jọn 5: 25-29
25 N'ezie, n'ezie, ana m asị unu, oge awa na -abịa, ọ dịkwa ugbu a, mgbe ndị nwụrụ anwụ ga -anụ olu Ọkpara Chineke, ndị nụrụ ya ga -adịkwa ndụ. 26 N'ihi na dika Nnam nwere ndu nime onwe -ya, otú a ka O nye -kwa -ra Ọkpara -Ya inwe ndu nime Onwe -ya. 27 O nyewokwa ya ikike ikpe ikpe, n'ihi na ọ bụ Nwa nke mmadụ. 28 Ka ihe a ghara iju unu anya, n'ihi na oge awa na -abịa mgbe ndị niile nọ n'ili ga -anụ olu ya 29 puta kwa, ndi mere ezi ihe rue nbilite -n'ọnwu nke ndu, ndi mere ajọ ihe gābilite na nbilite -n'ọnwu nke ikpé.
Jọn 8: 24-28
24 Agwara m gị na ị ga -anwụ n'ime mmehie gị, n'ihi na ọ gwụla ma ị kwere na m bụ ya, ị ga -anwụ n'ime mmehie gị. " 25 Ya mere ha siri ya, Ì bu onye? Jizọs sịrị ha, “Naanị ihe m na -agwa unu site na mmalite. 26 Enwere m ọtụtụ ihe ikwu gbasara gị na ọtụtụ ihe m ga -ekpe ikpe, mana onye zitere m bụ eziokwu, m na -agwakwa ụwa ihe m nụrụ n'ọnụ ya. " 27 Ha aghọtaghị na ọ na -agwa ha gbasara Nna ya. 28 Ya mere, Jizọs sịrị ha:Mgbe unu buliri Nwa nke mmadụ elu, mgbe ahụ ka unu ga -amata na ọ bụ m bụ ya, na anaghị m eme ihe ọ bụla n'ike nke aka m, kama na -ekwu dị ka Nna m ziri m..
Mesaịa ahụ nke ga -abịa n'ụwa (onye a na -akpọ Kraịst) - ọ bụ ya ga -agwa anyị ihe niile mgbe ọ bịara. (Jọn 4:25) Jizọs bụ onye Chineke họpụtara, bụ́ nwa Chineke nyere anyị iwu ka anyị gee ya ntị. (Luk 9:35) Kraịst nke Chineke bụ onye Chineke họpụtara. (Luk 23:35) Ihe a Chineke mezuru site n'ọnụ ndị amụma niile, na Kraịst ya ga -ata ahụhụ. (Ọrụ 3:18). Kraịst ahụ Chineke họpụtara nye anyị bụ Jizọs. (Ọrụ 3:20) Jizọs bụ onye ahụ Moses kwuru banyere ya, “Onyenwe anyị Chineke ga -esi n'etiti ụmụnne gị họpụtara gị onye amụma dịka m. Ị ga -ege ya ntị n'ihe ọ bụla ọ ga -agwa gị. Ọ ga -abụkwa na mkpụrụ obi ọ bụla nke na -egeghị onye amụma ahụ ntị, a ga -ebibi ya n'etiti ndị mmadụ. ' (Ọrụ 3: 22-23) Jizọs bụ mkpụrụ Abraham nke a gọziri ezinụlọ nile nke ụwa n'ime ya. (Ọrụ 3:25) Chineke mere ka onye na -ejere ya ozi bilie, zipụ ya ka ọ bụrụ ngọzi site n'ịtụgharị onye ọ bụla n'ajọ omume ya (Ọrụ 3:26)
Jisus siri, Mọ nke Onye-nwe-ayi dikwasim, n'ihi na O tewom manu ikwusa ozi ọma. ( Luk 4:18 ) Ọ sịrị: “Ihe oriri m bụ ime uche onye zitere m nakwa ka m rụzuo ọrụ ya.” (Jọn 4:34) Ma adịghị m achọ uche nke m kama ọ bụ uche onye zitere m.” (Jọn 5:30) Jizọs kwuru banyere ozizi ya, sị: “Ozizi m abụghị nke m, kama ọ bụ nke onye zitere m.” ( Jọn 7:16 ) N’ezie, o kwuru, sị: “Anaghị m eme ihe ọ bụla n’aka nke m, kama na-ekwu dị ka Nna m kụziiri m” nakwa “M na-eme ihe dị ya mma mgbe niile.” ( Jọn 8:28-29 ) Jizọs bụ nwoke kwuru eziokwu ọ nụrụ n’ọnụ Chineke. ( Jọn 8:40 ) O kwughị okwu n’ike nke aka ya, kama Nna nke zitere ya nyere ya iwu ihe ọ ga-ekwu na ihe ọ ga-ekwu. ( Jọn 12:49-50 ) O sikwara “okwu ahụ unu na-anụ abụghị nke m, kama ọ bụ nke Nna nke zitere m. (Jọn 14:24). Jizọs abịaghị n’onwe ya, ma Chineke zitere ya.” (Jọn 8:42) Ọ kwusiri ike, sị: “Ọ bụrụ na m enye onwe m otuto, ebube m abụghị ihe ọ bụla. Ọ bụ Nna m na-enye m otuto, onye unu na-ekwu banyere ya, sị, ‘Ọ bụ Chineke anyị.’” ( Jọn 8:54 ) Jizọs kwuru, sị: “Mgbe unu weliri Ọkpara nke mmadụ elu, unu ga-amarakwa na mụ onwe m bụ ya, Anaghị m eme ihe ọ bụla n'ike nke m, kama na-ekwu dị ka Nna kụziiri m. (Jọn 8:28)
Jizọs, nwoke ahụ nke Chineke gbara ama site n'ịrụ nnukwu ọrụ na ọrụ ebube na ihe iriba ama nke Chineke mere site n'aka ya, ka a tọhapụrụ dịka atụmatụ na amụma Chineke siri dị. (Ọrụ 2: 22-23) Ọ nọgidere na-enyefe onwe ya n'aka onye na-ekpe ikpe ziri ezi. (1 Pita 2:23) Ebe ọ nọ n'oké ahụhụ, ebe ọ ghọtara ọnwụ jọgburu onwe ya ọ na -aga ịnata, Jizọs kpere ekpere, "Nna, ọ bụrụ na ị dị njikere, wepụ iko a n'ebe m nọ. Ka o sina dị, ka uche gị mee, ọ bụghị nke m. ” (Luk 22:42) N’ụbọchị anụ ahụ ya, Jizọs jiri mkpu akwa na anya mmiri were ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike nye onye nwere ike ịzọpụta ya n’ọnwụ, a nụkwara ya n’ihi nsọpụrụ ya. (Hib 5: 7) Ọ bụ ezie na ọ bụ nwa nwoke, ọ mụtara nrubeisi site na ahụhụ ọ tara (Hib 5: 8). Ebe emere ya ka o zuo oke, ọ ghọrọ isi iyi nke nzọpụta ebighi ebi nye ndị niile na -erubere ya isi. (Hib 5: 9) Nna ahụ hụrụ ya n'anya n'ihi na ọ tọgbọrọ ndụ ya na nrubeisi. (Jọn 10:17) O wedara onwe ya ala site na irube isi ruo ọnwụ, ọbụnadị ọnwụ n'elu obe- Ya mere Chineke ebuliwo ya elu nke ukwuu wee nye ya aha dị elu karịa aha niile. (Ndị Filipaị 2: 8-11) Nke a kwekọrọ n'amụma ahụ 'ohu m ga-eji amamihe mee ihe, ọ ga-adị elu ma bulie ya elu, a ga-ebulikwa ya elu.' (Aịsaịa 52:13)
Jọn 4: 25-26
25 Nwanyị ahụ sịrị ya, "Ama m na Mezaịa na -abịa (onye a na -akpọ Kraịst). Mgbe ọ bịara, ọ ga -agwa anyị ihe niile. " 26 Jisus siri ya, Mu onwem Nke nāgwa gi okwu bu Ya. "
Luk 9:35 (NLT)
35 Na otu olu si n'ígwé ojii ahụ pụta, sị,Onye a bụ Ọkpara m, Onye M họpụtara; gee ya ntị! "
Luk 23:35 (NLT)
5 Ma ndị mmadụ guzoro na -ele anya, mana ndị na -achị ya mere ya akaja, na -asị, “Ọ zọpụtara ndị ọzọ; ya zọputa onwe -ya, ọ buru na ọ bu Kraist nke Chineke, Onye Ọ rọputara! "
Ọrụ Ndị Ozi 3: 18 (NIV)
18 Mana ihe Chineke buru n'amụma site n'ọnụ ndị amụma niile, na Kraịst ya ga -ata ahụhụ, o si otu a mezuo.
Ọrụ 3: 19-26
19 Ya mere chegharia, chigharia, ka ewe b͕apu nmehie-unu, 20 ka oge inye ume wee si n'ihu Onyenwe anyị bịa, ka o wee zite Kraịst ahụ a họpụtara nye unu, Jizọs, 21 bụ onye eluigwe ga-enwerịrị ruo mgbe ọ ga-eweghachite ihe niile Chineke kwuru site n'ọnụ ndị amụma ya dị nsọ ogologo oge gara aga. 22 Moses we si, Onye -nwe -ayi Jehova g willme ka onye -amuma, nke di ka mu onwem, biliere gi site n'etiti umu -nne -gi. Ị ga -ege ya ntị n'ihe ọ bụla ọ ga -agwa gị. 23 Ọ gēru kwa, na nkpuru-obi ọ bula nke nāgaghi-ege nti onye-amuma ahu, agēbipu ya n'etiti ndi Israel. 24 Ndi-amuma nile ndi nēkwu okwu, site na Samuel na ndi soro ya, kwusara ubọchi ndia. 25 Unu bụ ụmụ ndị amụma na ọgbụgba ndụ nke Chineke na nna nna unu gbara, na -asị Abraham, 'Na mkpụrụ gị ka a ga -agọzi ezinụlọ niile nke ụwa.' 26 Chineke, ebe O mere ka odibo ya bilie, buru ụzọ zitere ya ya ka ọ gọzie gị site n'ịtụgharị onye ọ bụla n'ime gị n'ajọ omume gị. "
Luk 4:18 (NLT)
18 "Mọ nke Onye-nwe dikwasi m,
n'ihi na o tere m mmanụ
ikwusa ozi ọma nye ndị ogbenye.
O zitewo m ikwusara ndị a dọtara n'agha nnwere onwe
Ọ na-emekwa ka ndị ìsì hụ ụzọ.
ịtọhapụ ndị a na -emegbu emegbu,
34 Jizọs sịrị ha, “Udia mi edi ndinam uduak enye emi ọkọdọn̄de mi nnyụn̄ nnam utom esie.
30 "Enweghị m ike ime ihe ọ bụla n'onwe m. Ka m na -anụ, m na -ekpe ikpe, ikpe m ziri ezi, n'ihi na anaghị m achọ uche nke m kama ọ bụ uche onye zitere m.
16 Ya mere, Jizọs zara ha, sị:Ozizi m abụghị nke m, kama ọ bụ nke onye zitere m.
Jọn 8: 28-29
28 Ya mere, Jizọs sịrị ha:Mgbe unu buliri Nwa nke mmadụ elu, mgbe ahụ ka unu ga -amata na ọ bụ m bụ ya, na anaghị m eme ihe ọ bụla n'ike nke aka m, kama na -ekwu dị ka Nna m ziri m.. 29 Onye ziterem nọ kwa. Ọ hapụghị m naanị m, n'ihi na Ana m eme ihe na -atọ ya ụtọ mgbe niile. "
40 ma ugbu a, ị na -achọ igbu m, nwoke nke gwaworo unu eziokwu nke m nụrụ n'ọnụ Chineke. Nke a abụghị ihe Abraham mere.
Jọn 12: 49-50
49 n'ihi na Ekwughị m okwu n'onwe m, kama ọ bụ Nna m nke zitere m nyere m iwu ihe m ga -ekwu na ihe m ga -ekwu.. 50 Amakwaara m na ihe o nyere n'iwu bụ ndụ ebighi ebi. Ya mere, ihe m na -ekwu, Ana m ekwu dị ka Nna gwara m. "
24 Onye na -ahụghị m n'anya anaghị edebe okwu m. Okwu ahụ ị na -anụ abụghị nke m, kama ọ bụ nke Nna zitere m.
42 Jisus siri ha, Ọ buru na Chineke bu Nna -unu, unu gāhum n'anya: n'ihi na Mu onwem siri n'ebe Chineke nọ puta we bia n'ebe a. Abịaghị m n’onwe m, kama ọ bụ ya zitere m.
54 Jisus zara, si,Ọ bụrụ na m na -enye onwe m otuto, otuto m abụghị ihe ọ bụla. Ọ bụ Nna m na -enye m otuto, onye ị na -ekwu maka ya, 'Ọ bụ Chineke anyị. '
28 Ya mere Jisus siri ha, Mb Whene unu weliri Nwa nke madu elu, mb youe ahu ka unu gāmara na Mu onwem bu Ya; Adịghị m eme ihe ọ bụla n'ike aka m, kama na -ekwu dị ka Nna m ziri m. 29 Onye ziterem nọ kwa.
Ọrụ 2: 22-23
22 “Ndị Izrel, nụrụ okwu ndị a: Jizọs onye Nazaret, nwoke nke Chineke gbara unu akaebe site n'ịrụ nnukwu ọrụ na ọrụ ebube na ihe iriba ama nke Chineke sitere n'aka ya mee n'etiti unu, dị ka gị onwe gị maara - 23 Jisus a, nke a raara nye dịka atụmatụ na amamihe nke Chineke siri dị, ị kpọgidere n'obe ma gbuo site n'aka ndị na -emebi iwu.
1 Pita 2: 23
23 Mgbe a na -ekwujọ ya, ọ dịghị ekwujọgwara; ke ini enye okokụtde ndutụhọ, enye ikefeheke, edi nọgidere na -enyefe onwe ya n'aka onye na -ekpe ikpe ziri ezi.
Luk 22:42 (NLT)
2 si, “Nna, ọ bụrụ na ị dị njikere, wepụ iko a n'ebe m nọ. Ka o sina dị, ọ bụghị uche m, kama nke gị. "
Ndị Hibru 5: 7-10
7 N’ụbọchị anụ ahụ ya, Jizọs jiri akwa akwa na anya mmiri were ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike nye onye nwere ike ịzọpụta ya n’ọnwụ, na a nụrụ ya n'ihi nsọpụrụ ya. 8 N'agbanyeghị na ọ bụ nwa nwoke, ọ mụtara nrubeisi site na ahụhụ ọ tara. 9 Ebe emere ya ka o zuo oke, ọ ghọrọ isi iyi nke nzọpụta ebighi ebi nye ndị niile na -erubere ya isi, 10 ebe Chineke hoputara ya onye -isi -nchu -àjà dika usoro Melkizedek si di.
17 Ọ bụ ya mere Nna m ji hụ m n'anya, n'ihi na m na -atọgbọ ndụ m ka m weghachi ya ọzọ.
(Ndị Filipaị 2: 8-11)
8 Ebe achọtara ya n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site na irube isi ruo ọnwụ, ọbụnadị ọnwụ n'obe. 9 Ya mere, Chineke ebuliela ya elu nke ukwuu wee nye ya aha dị elu karịa aha niile, 10 ka ikpere nile we b bowue n'ala n'aha Jisus, n'elu-igwe na n'elu uwa na n'okpuru uwa, 11 na ire nile na -ekwupụta na Jisus Kraịst bụ Onye -nwe, iji nye Chineke Nna otuto.
13 Le, ohu m ga -eji amamihe mee ihe; ọ ga -adị elu ma bulie ya elu, a ga -ebulikwa ya elu.
Mgbe Pita kwupụtasịrị Jizọs dị ka “Kraịst nke Chineke,” Jizọs sịrị, “Nwa nke mmadụ aghaghị ịta ahụhụ nke ukwuu, ndị okenye na ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ ga -ajụkwa ya, e wee gbuo ya, a ga -akpọlitekwa ya n’ụbọchị nke atọ. (Luk 9: 20-22) Jizọs ghọtara na ya ga-ebu ụzọ taa ọtụtụ ahụhụ ma jụ ya tupu emezuo ihe niile gbasara Nwa nke mmadụ. (Luk 17: 22-25) Jizọs kọwara na ya bụ ohu na-ata ahụhụ (Nwa nke mmadụ) nke ndị amụma gbara ama banyere ya. (Luk 18: 31-34) O kwuru na a ga-enyefe ya n'aka ndị mba ọzọ na a ga-akwa ya emo ma mee ya ihe ihere ma gbụọ ya ọnụ mmiri, mgbe a pịakwara ya ihe, a ga-egbu ya ma n'ụbọchị nke atọ bilie. (Luk 18: 32-33) Ọ dị mkpa na Akwụkwọ Nsọ mezuru n'ahụ ya na, 'a gụrụ ya na ndị na-emebi iwu.' (Luk 22:37) Jizọs so ndị na -eso ụzọ ya rie nri ikpeazụ, ebe ọ maara na ọ na -aga ịta ahụhụ. (Luk 22:14) O weere achịcha, mgbe o nyesịrị ekele, nyawaa ya nye ndị na -eso ụzọ ya, sị, “Nke a bụ ahụ m, nke e nyere maka unu. Na -emenụ nke a ka unu wee na -echeta m. ” (Luk 22:19) N'otu aka ahụkwa iko ahụ mgbe ha risịrị nri, na -asị, “Iko a wụpụụrụ unu bụ ọgbụgba ndụ ọhụrụ n'ime ọbara m.” (Luk 22:20) Ọbara Jizọs ka e ji nweta ụka nke Chineke. (Ọrụ 20:28)
Dịka otu njehie butere ikpe maka mmadụ niile, otu ahụ ka otu omume ezi omume na -eduga mmadụ n'onye ezi omume na ndụ nye mmadụ niile. (Ndị Rom 5:18) N'ihi na dị ka nnupụisi nke otu onye mere ọtụtụ mmadụ ka ha bụrụ ndị mmehie, otu a ka nrube isi nke otu onye ahụ ga -esi mee ka ọtụtụ ndị bụrụ ndị ezi omume. (Ndị Rom 5:19) Jizọs wedara onwe ya ala site na irube isi ruo ọnwụ, ọbụnadị ọnwụ n'elu obe- Ya mere Chineke ebuliwo ya elu nke ukwuu wee nye ya aha dị elu karịa aha niile, nke mere na n'aha Jizọs onye ọ bụla ikpere ga -ehulata, ire niile ekwupụta na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị, ka e wee nye Chineke Nna otuto. (Ndị Filipaị 2: 8-11)
Ezi omume nke Chineke bụ site na okwukwe na Jizọs Kraịst maka ndị niile kwere - N'ihi na ọ dịghị ihe dị iche: n'ihi na mmadụ niile emehiela, ha adịghị erukwa ebube Chineke, a na -akpọkwa ha ndị ezi omume site n'amara ya dị ka onyinye, site na mgbapụta nke dị n'ime Kraịst Jizọs, onye Chineke wepụtara n'ihu ya ka ọ bụrụ ihe ịjụrụ ya obi site na okwukwe ya, ka o wee nabata ya n'okwukwe. (Ndị Rom 3: 22-25) Ewezuga Oziọma ahụ, anyị nwụrụ anwụ na njehie na ebìghị úgwù nke anụ ahụ mana site n'Oziọma Chineke na-eme ka anyị na ya dịrị ndụ, ebe ọ gbaghaara anyị njehie anyị niile, site n'ịkagbu ndekọ ndekọ nke ụgwọ. imegide ha site n'ihe iwu chọrọ - O wezuga nke a, kpọgide ya n'obe. (Kọl 2: 13-14) A gbapụtara ndị kwere ekwe site n'ụzọ efu nke ha ketara n'aka ndị nna nna ha, ọ bụghị site na ihe na-emebi emebi dị ka ọlaọcha ma ọ bụ ọla edo, kama jiri ọbara dị oke ọnụ ahịa nke Kraịst, dị ka nke nwa atụrụ na-enweghị ntụpọ ma ọ bụ ntụpọ. (1Pet 1: 18-19) Ebu ụzọ mara ya tupu ntọala ụwa mana emere ka ọ pụta ìhè n'oge ikpeazụ maka ndị sitere na ya kwere na Chineke, onye mere ka o si n'ọnwụ bilie ma nye ya otuto. (1 Pita 1: 20-21)
Jizọs batara ebe nsọ otu ugboro, ọ bụghị site n'ọbara ewu na ụmụ ehi kama site n'ọbara nke ya, wee si otú a nweta mgbapụta ebighị ebi. (Ndị Hibru 9:12) N'ihi na ọ bụrụ na ọbara ewu na nke oke ehi, na ifesa ndị e merụrụ emerụ na ntụ nke nwa ehi, ga -edo nsọ maka ịdị ọcha nke anụ ahụ, lee ka ọbara Kraịst ga -esi dị nsọ karị, onye site na mmụọ ebighi ebi. nyere onwe ya n'enweghi mmerụ nye Chineke, mee ka akọ na uche anyị dị ọcha pụọ ​​n'ọrụ nwụrụ anwụ iji jeere Chineke dị ndụ ozi. (Ndị Hibru 9: 13-14) Ya mere ọ bụ onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ka ndị akpọrọ wee nata ihe nketa ebighi-ebi ekwere na nkwa, ebe ọ bụ ọnwụ nwụrụ nke na-agbapụta ha na mmebi iwu ndị emere n'okpuru ọgbụgba ndụ nke mbụ. (Ndị Hibru 9:15) Kraịst abanyela n'eluigwe, ugbu a ịpụta n'ihu Chineke n'aha anyị. (Ndị Hibru 9:24) Ọ pụtara otu ugboro naanị na njedebe nke afọ iji wepụ mmehie site n'ịchụ onwe ya n'àjà. (Ndị Hibru 9:26) Ebe a chụrụ ya àjà otu ugboro ka ọ buru mmehie nke ọtụtụ mmadụ, Jizọs ga -apụta nke ugboro abụọ, ọ bụghị iji mebie mmehie kama ọ ga -azọpụta ndị na -eche ya. (Ndị Hibru 9:28)
"Jizọs bụ Nwa atụrụ Chineke, onye na -ewepụ mmehie nke ụwa!" (Jọn 1:29) Ọ bụrụ na anyị na -eje ije n'ìhè, anyị na -enwe mkpakọrịta n'etiti onwe anyị, ọbara Jizọs Ọkpara ya na -asachapụ anyị mmehie niile. (1 Jọn 1: 7) Ìgwè mmadụ nọ n'eluigwe ga -abụ abụ ọhụrụ, na -asị, "I ruru eru, n'ihi na e gburu gị, ọ bụkwa site n'ọbara gị ka ị gbapụtara ndị mmadụ maka Chukwu n'ebo niile na asụsụ niile na ndị mmadụ na mba niile, i mekwara ha alaeze na ndị nchụàjà. nye Chineke anyị, ha ga -achịkwa n'elu ụwa. ” (Mkpughe 5: 9-10)
(Gụọ Luk 9: 20-22.)
20 Mgbe ahụ ọ sịrị ha, "Ma onye ka unu na -asị na m bụ?" Na Pita zara, "Kraịst nke Chineke." 21 O we kwusi ike ma gwa ha ka ha ghara igwa onye a ihe a, 22 si, “Nwa nke mmadụ aghaghị ịta ahụhụ nke ukwuu, ndị okenye na ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ ga -ajụkwa ya, wee gbuo ya, a ga -akpọlitekwa ya n'ụbọchị nke atọ.. "
(Gụọ Luk 17: 22-26.)
2 O we si ndi n disciplesso uzọ -Ya, Ubọchi nābia, mb youe unu gāchọ ihu otù nime ubọchi Nwa nke madu, ma unu agaghi -ahu ya. 23 Ha gāsi kwa gi, Le, n'ebe ahu. ma ọ bụ 'Lee, ebe a!' Unu apụla ma ọ bụ soro ha. 24 N'ihi na dị ka àmụmà na -enwu ma na -amụnye elu -igwe site n'otu akụkụ ruo n'akụkụ nke ọzọ, otu ahụ ka Nwa nke mmadụ ga -adị n'ụbọchị ya. 25 Ma ọ ga -ebu ụzọ taa ọtụtụ ahụhụ, ọgbọ a ajụ ya. 26 Dịka ọ dị n’ụbọchị Noa, otu a ka ọ ga -adịkwa n’ụbọchị Nwa nke mmadụ.
(Gụọ Luk 18: 31-34.)
31 O we chiri madu iri na abua ahu, si ha, Le, ayi nārigoro Jerusalem, ma ihe ọ bụla e dere banyere Nwa nke mmadụ site n'ọnụ ndị amụma ga -emezurịrị. 32 N'ihi na a ga -enyefe ya n'aka ndị mba ọzọ, a ga -akwakwa ya emo ma mee ya ihe ihere ma gbụọ ya ọnụ mmiri. 33 AMgbe ha pịasịrị ya ihe, ha ga -egbu ya, na n'ụbọchị nke atọ, ọ ga -ebili. " 34 Ma ha aghọtaghị ihe ọ bụla n'ime ihe ndị a. Ezoro ha okwu a, ha aghọtaghị ihe ekwuru.
Luk 22:37 (NLT)
37 N'ihi na asim unu, na ihe edeworo n'akwukwọ nsọ aghaghi imezu n'arum: Ewe gua ya na ndi -njehie. ' N'ihi na ihe e dere banyere m na -emezurịrị. ”
(Gụọ Luk 22: 19-20.)
19 O we nara ob breade achicha, kele kwa, we nyawa ya, nye ha, si,Nke a bụ ahụ m, nke enyere maka gị. Na -emenụ nke a ka unu wee na -echeta m. ” 20 Na kwa iko ahụ mgbe ha risịrị nri, na -asị, “Iko a wụpụụrụ unu bụ ọgbụgba ndụ ọhụrụ n'ime ọbara m.
29 N'echi ya ọ hụrụ Jizọs ka ọ na -abịakwute ya, o wee sị,Le, Nwa -aturu Chineke, Nke n awaybupu nmehie nke uwa!
Ọrụ Ndị Ozi 20: 28 (NIV)
28 Lezienu onwe -unu na ìgwè aturu anya nke -ọma, nke Mọ Nsọ mere unu ndi nlekọta nime ya, ilekọta nzukọ Chineke. nke o jiri ọbara nke ya nweta.
Ndị Rom 5: 18-19
18 Ya mere, dịka otu njehie butere ikpe maka mmadụ niile, otu a otu omume nke ezi omume na -eduba mmadụ niile n'onye ezi omume na ndụ. 19 N'ihi na dị ka nnupụisi nke otu onye ahụ mere ọtụtụ mmadụ ka ha bụrụ ndị mmehie, otu a kwa ka nrube isi nke otu onye ahụ ga -eme ka ọtụtụ ndị bụrụ ndị ezi omume.
Ndị Rom 3: 22-25
22 ezi omume nke Chineke site na okwukwe na Jisus Kraist maka ndi nile kwere. N'ihi na ọ dighi ihe di iche: 23 n'ihi na mmadụ niile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke. 24 na a na -agụ gị n'onye ezi omume site n'amara ya dị ka onyinye, site na mgbapụta nke dị n'ime Kraịst Jizọs, 25 onye Chineke wepụtara n'ihu ya ka ọ bụrụ ihe ịjụrụ ya obi site n'ọbara ya, ka okwukwe ya wee nata ya. Nke a bụ iji gosi ezi omume Chineke, n'ihi na n'ime ntachi obi ya dị nsọ ọ gafere mmehie mbụ.
Ndị Kọlọsi 2: 13-14
13 Ma unu, ndị nwụrụ anwụ site na njehie unu na ebìghị -úgwù nke anụ ahụ unu, Chineke mere ka ya na ya dị ndụ, ebe ọ gbaghaara anyị njehie anyị niile, 14 site n'ịkagbu ndekọ ndekọ ụgwọ nke kwụgidere anyị na ihe iwu chọrọ. O wezuga nka, kpọgide Ya n'obe.
(1 Pita 1: 18-21)
18 ebe ị maara na agbapụtala gị site n'ụzọ efu nke unu ketara n'aka nna nna unu hà, ọ bụghị site n'ihe ndị pụrụ ire ure dị ka ọlaọcha ma ọ bụ ọlaedo, 19 kama site n'ọbara di oke ọnụ ahịa nke Kraist, dị ka nke nwa atụrụ na -enweghị ntụpọ ma ọ bụ ntụpọ. 20 Ebu ụzọ mara ya tupu a tọọ ntọala ụwa mana emere ka ọ pụta ìhè n'oge ikpeazụ n'ihi gị 21 ndi sitere n'aka -ya kwere na Chineke, Onye mere ka O si na ndi nwuru anwu bilie, nye kwa Ya otuto, ka okwukwe -unu na olile -anya -unu we di na Chineke..
1 Jọn 1:7
7 Ma ọ bụrụ na anyị na -eje ije n'ìhè, dị ka ọ nọ n'ìhè, anyị na -enwe mmekọrịta n'etiti onwe anyị, ọbara Jizọs Ọkpara ya na -asachapụ anyị mmehie niile.
Ndị Hibru 9: 12-15
12 ọ banyere ebe nsọ otu ugboro, ọ bụghị site n'ọbara ewu na ụmụ ehi mana site n'ọbara nke ya, si otú a na -echekwa mgbapụta ebighị ebi. 13 N'ihi na asi na ọbara ewu na oke -ehi, na ifesa nke ndi emeruru emeru na ntu nwa -abiferọghọ, edoro nsọ nsọ ime anu -aru. 14 lee ka ọbara Kraịst, onye sitere na Mmụọ ebighi ebi were chụọ onwe ya n'àjà nye Chineke enweghị mmerụ, ga -asachapụ akọ na uche anyị pụọ n'ọrụ nwụrụ anwụ ijere Chineke dị ndụ ozi.. 15 Ya mere, ọ bụ onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ka ndi akpọrọ wee nata ihe nketa ebighi -ebi ekwere na nkwa, ebe ọnwụ nwụrụ nke na -agbapụta ha na njehie ndị e mere n'okpuru ọgbụgba ndụ nke mbụ.
Ndị Hibru 9: 24-28
24 Maka Kraịst abanyela, ọ bụghị n'ebe nsọ ejiri aka mee, nke bụ ihe atụ nke ezi ihe, kama mn'ime eluigwe n'onwe ya, ugbu a ịpụta n'ihu Chineke n'aha anyị.25 Ọ bụghịkwa iji onwe ya chụọ àjà ugboro ugboro, ebe nnukwu onye nchụàjà na -abata ebe nsọ kwa afọ na ọbara na -abụghị nke ya, 26 n'ihi na mgbe ahụ ọ gaara ata ahụhụ ugboro ugboro kemgbe mmalite nke ụwa. Mana ka ọ dị, Ọ pụtara otu ugboro naanị na ngwụcha afọ iji wepụ mmehie site n'ịchụ onwe ya n'àjà. 27 Na dịka e debere ka mmadụ nwụọ otu ugboro, emesịa ikpe ga -abịa, 28 so Kraịst, ebe a chụrụ ya otu ugbo ka ọ buru mmehie nke ọtụtụ mmadụ, ọ ga -apụta nke ugboro abụọ, ọ bụghị ime mmehie kama ịzọpụta ndị na -eche ya..
Mkpughe 5: 8-10
8 Mgbe o were akwụkwọ mpịakọta ahụ, ihe anọ ahụ dị ndụ na ndị okenye iri abụọ na anọ ahụ dara n'ihu Nwa Atụrụ ahụ, onye ọ bụla na-ejide ụbọ akwara, na iko ọlaedo juru n'ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, nke bụ ekpere ndị nsọ. 9 Ha we bù abù ọhu, si, I kwesiri ka i were akwukwọ -npiakọta ahu, meghe kwa akàrà -ya; n'ihi na egburu gị, ọ bụkwa site n'ọbara gị ka ị gbapụtara ndị mmadụ maka Chukwu site n'ebo niile na asụsụ niile na ndị mmadụ na mba niile, 10 i we me ha ka ha buru ala -eze na ndi -nchu -àjà nye Chineke -ayi, ha gābu kwa eze n'elu uwa. "
A mewo ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie, nkpuru mbu nke ndi dara n'ura. (1 Ndị Kọrint 15:20) N’ihi na dị ka ọnwụ sitere n’aka mmadụ, mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ sitere n’aka mmadụ—n’ihi na dị ka mmadụ nile na-anwụ n’ime Adam, otú ahụ ka a ga-emekwa ka mmadụ nile dị ndụ n’ime Kraịst. (1Kọ 15:21-22) Ihe a ghara ịgha na-emebi emebi; ihe ewelitere bụ ihe na-adịghị emebi emebi. (1Kọ 15:42) Nwoke mbụ ahụ bụ́ Adam ghọrọ ihe dị ndụ, Adam ikpeazụ ghọrọ mmụọ na-enye ndụ. (1 Ndị Kọrịnt 15:45). Dị ka onye ájá si dị, otú ahụ ka ndị si n’ájá dị, na dị ka onye elu-igwe, otú ahụ ka ndị si n’eluigwe dịkwa. (1Kọ 15:48) Dị nnọọ ka anyị yiworo onyinyo nke mmadụ nke ájá, anyị ga-ebukwa onyinyo nke onye eluigwe. (1 Ndị Kọrịnt 15:49) Anụ ahụ́ na ọbara apụghị iketa alaeze Chineke, ndị na-emebi emebi adịghịkwa eketa ihe na-apụghị ire ure. (1 Ndị Kọrịnt 15:50) A ga-akpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ n’ime Kraịst ka ha ghara ịnwụ anwụ, a ga-agbanwekwa ha niile. (1 Ndị Kọrịnt 15:52) N’ihi na onye na-emebi emebi na-aghọ ihe a na-apụghị ibibi ebibi, onye na-anwụ anwụ na-anata anwụghị anwụ. (1Kọ 15:53) Ihe ogbugbu nke ọnwụ bụ mmehie, ike nke mmehie bụkwa iwu—Ma ekele dịrị Chineke, Onye na-enye anyị mmeri site n’aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst! (1 Ndị Kọrịnt 15:56)
Oziọma nke ndị kwere ekwe natara nke a na -eji azọpụta ha, bụ okwu ekwusara site n'aka ndị ozi. (1 Ndị Kọrịnt 15: 1-2) Nke kachasị mkpa bụ na Kraịst nwụrụ maka mmehie anyị dịka Akwụkwọ Nsọ siri kwuo, na e liri ya, na a kpọlitere ya n'ụbọchị nke atọ dịka Akwụkwọ Nsọ siri kwuo. (1 Ndị Kọrịnt 15: 3-4) Ọ pụtara n'ihu Sifas, emesịa pụta n'ihu mmadụ iri na abụọ ahụ, mgbe ahụ ọ pụtara n'ihu ihe karịrị narị ụmụnna ise n'otu oge, emesịa ọ pụtara n'ihu Jemes, emesịa hụ ndịozi niile, emesia pụtakwara Pọl. (1 Ndị Kọrịnt 15: 5-8) Anyị na-ekwusa Kraịst dị ka onye e si n'ọnwụ kpọlite. (1 Ndị Kọrịnt 15:12) Nkwenye ná mbilite n'ọnwụ bụ ihe dị mkpa n'okwukwe. (1 Ndị Kọrịnt 15: 17-19)
1 Ndị Kọrịnt 15: 20-22
20 Ma n'ezie, emewo ka Kraịst si n'ọnwụ bilie, mkpụrụ mbụ nke ndị dara n'ụra. 21 N'ihi na dị ka ọnwụ si n'aka otu onye, ​​mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ sikwa n'aka otu onye. 22 N'ihi na dịka mmadụ niile na -anwụ n'ime Adam, otu a kwa ka a ga -eme ka mmadụ niile dị ndụ n'ime Kraịst.
1 Ndị Kọrịnt 15: 42-49
42 Otú ahụkwa ka mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ dị. Ihe a kụrụ na -emebi emebi; ihe a kpọlitere anaghị emebi emebi. 43 A na -agha ya n'emeghị ihere; a na -ebuli ya elu n'ebube. A na -agha ya n'adịghị ike; a na -ebuli ya elu n'ike. 44 A na -akụ ya dị ka anụ ahụ́; a na -akpọlite ​​ya mmụọ nke mmụọ. Ọ bụrụ na anụ ahụ nke anụ ahụ dị, ahụ mmụọ dịkwa. 45 Otua ka edeworo ya n'akwukwọ, “nwoke mbu Adam ghọrọ ihe dị ndụ”; Adam ikpeazụ ghọrọ mmụọ na-enye ndụ. 46 Ma ọ bụghị nke ime mmụọ bụ nke mbụ kama ọ bụ nke anụ ahụ, emesịa ọ bụ nke mmụọ. 47 Madu mbu sitere n'ala, nwoke sitere n'uzuzu; nwoke nke abụọ sitere n'eluigwe. 48 Dị ka onye ahụ sitere n'ájá, otú ahụkwa ka ndị sitere n'ájá dị, otú ahụkwa ka onye nke eluigwe dị, otú ahụkwa ka ndị nke eluigwe dị.. 49 Dị nnọọ ka anyị buliri onyinyo nke onye ájá, otú ahụ ka anyị ga -ejikwa onyinyo nke onye eluigwe ahụ.
1 Ndị Kọrịnt 15: 50-53
50 Ana m agwa unu nke a, ụmụnna: anụ ahụ na ọbara apụghị iketa alaeze Chineke, onye na -emebi emebi adịghịkwa eketa ereghị ure. 51 Lee! Ana m agwa gị ihe omimi. Anyị niile agaghị ehi ụra, mana anyị niile ga -agbanwe, 52 n'otu ntabi anya, n'otu ntabi anya, n'oge opi ikpeazụ. N'ihi na a ga -afụ opi, a ga -akpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ na -apụghị ire ure, a ga -agbanwekwa anyị. 53 N'ihi na aru a nke pụrụ ire ure aghaghị iyiri ihe na -apụghị ire ure, ahụ a na -anwụ anwụ aghaghị iyikwasị anwụghị anwụ.
1 Ndị Kọrịnt 15: 56-57
56 Ihe ọgbụgba nke ọnwụ bụ mmehie, ike nke mmehie bụkwa iwu. 57 Ma ekele dịrị Chineke, onye na -enye anyị mmeri site n'aka Onyenwe anyị Jisọs Kraịst.
1 Ndị Kọrịnt 15: 1-8
Na1 Ugbu a, m ga -echetara gị, ụmụnna, ozi ọma nke m kwusara unu, nke unu natara, nke unu guzoro na ya, 2 nke esite -kwa -ra na ya zọputa unu, ma ọ buru na unu jidesie okwu nke m'kwusara unu ike, ma ọ buru na unu ekweghi n'ihe -efu.
3 n'ihi na M nyefere gị ihe dị ka ihe dị mkpa, ihe m natakwara: na Kraịst nwụrụ maka mmehie anyị dịka Akwụkwọ Nsọ siri kwuo, 4 na e liri ya, na a kpọlitere ya n'ụbọchị nke atọ dị ka Akwụkwọ Nsọ kwuru, 5 na ọ pụtakwara n'ihu Sifas, e mesịa, ọ pụtara n'ihu ndị ozi iri na abụọ ahụ. 6 Mgbe ahụ ọ pụtara n'ihu ihe karịrị narị ụmụnna ise n'otu oge, ọtụtụ n'ime ha ka dị ndụ, n'agbanyeghị na ụfọdụ adawo n'ụra. 7 Ekem enye owụt James idem, ekem owụt kpukpru mme apostle. 8 N'ikpe -azu ha nile, dika Ọkpara amuru n'onye nimmeghi ihe, Ya onwe -ya me -kwa -ra ka m'hu Ya.
1 Ndị Kọrịnt 15:12
12 ugbu a ọ buru na an proclakwusa Kraist dika onye emere ka o si na ndi nwuru anwu bilie, le ka ufọdu n'etiti unu si asi na nbilite -n'ọnwu nke ndi nwuru anwu adighi?
1 Ndị Kọrịnt 15: 17-19
17 Ọ bụrụkwa na a kpọliteghị Kraịst, okwukwe unu bụ ihe efu, unu ka nọkwa na mmehie unu. 18 Ndi ahu ndi dara ura nime Kraist alawo n'iyi. 19 Ọ bụrụ na ọ bụ naanị na Kraịst ka anyị nwere olile anya na ndụ a, anyị bụ ndị kacha nwee ọmịiko.
Chineke nyere mmadụ niile iwu ka ha chegharịa ebe ọ bụla, n'ihi na ọ debela ụbọchị ọ ga -ekpe ụwa ikpe n'ezi omume site n'aka onye ọ họpụtara; na nke a ka o nyeworo mmadụ nile mmesi obi ike site na ịkpọlite ​​ya site na ndị nwụrụ anwụ. (Ọrụ 17: 30-31) Jizọs bụ onye Chineke họpụtara ka ọ bụrụ onyeikpe nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. (Ọrụ 10:42) Onye amụma niile na -agbara ya akaebe na onye ọ bụla nke kwere na ya na -enweta mgbaghara mmehie site n'aha ya. (Ọrụ 10:43) Ogologo oge gara aga, n'ọtụtụ oge na n'ọtụtụ ụzọ, Chineke gwara ndị nna nna anyị okwu site n'ọnụ ndị amụma, mana n'oge ikpeazụ a, o jirila Ọkpara ya gwa anyị okwu, onye ọ họpụtara onye nketa nke ihe niile. onye ọ kpụkwara ụwa. (Hib 1: 1-2) Mgbe ọ sachara mmehie, ọ nọdụrụ ala n'aka nri nke ịdị ukwuu nke ịdị elu, ebe ọ dị elu karịa ndị mmụọ ozi dịka aha o ketara dị mma karịa nke ha (Hib 1: 3) -4)
Ọ bụghị ndị mmụọ ozi ka Chineke doro ụwa nke na -abịa, nke anyị na -ekwu maka ya (Hib 2: 5) Jizọs na -amalite, onye mbụ sitere na ndị nwụrụ anwụ, ka o wee bụrụ onye kachasị elu n'ihe niile. (Ndị Kọlọsi 1:18) Chineke mere ya Onyenwe anyị na Kraịst, Jizọs nke a kpọgidere n'obe. (Ọrụ 2:36) N'ihi na e nwere otu Chineke, Nna, onye ihe niile sitere na ya na onye anyị bụ maka ya, na otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst, onye ihe niile sitere n'aka ya na onye anyị sitere. (Ndị Kọrịnt 8: 6) Chineke chọrọ ka a zọpụta mmadụ niile na ka ha bịa mara eziokwu ahụ - N'ihi na otu Chineke dị, yana otu onye ogbugbo dị n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Kraịst Jizọs, onye nyere onwe ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka mmadụ nile, nke bụ ịgba -ama a na -enye n'oge ya. (1Tim 2: 3-6) Ndụ ebighi ebi bụ ịmata onye naanị ya bụ ezi Chineke, marakwa Jizọs Kraịst onye o zitere. (Jọn 17: 3)
Ọrụ 17: 30-31
30 Chineke lefuru oge amaghị ama anya, mana ugbu a ọ na -enye mmadụ niile iwu ka ha chegharịa, 31 n'ihi na O wepụtala otu ụbọchị ọ ga -ekpe ụwa ikpe n'ezi omume site n'aka nwoke ọ họpụtara; na nke a ka o nyeworo mmadụ nile mmesi obi ike site na ịkpọlite ​​ya site na ndị nwụrụ anwụ. ”
Ọrụ 10: 42-43
42 O nyekwara anyị iwu ikwusara ndị mmadụ ozi ọma na ịgba ama nke ahụ ọ bụ onye ahụ Chineke họpụtara ka ọ bụrụ onyeikpe nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. 43 Ọ bụ ya ka ndị amụma niile na -agbara na onye ọ bụla nke kwere na ya na -enweta mgbaghara mmehie site n'aha ya. ”
Ndị Hibru 1: 1-4
1 Ogologo oge gara aga, n'ọtụtụ oge na n'ọtụtụ ụzọ, Chineke gwara ndị nna nna anyị okwu site n'ọnụ ndị amụma, 2 ma n'ime ụbọchị ikpeazụ ndị a, ọ gwala anyị okwu site n'aka Ọkpara ya, onye ọ họpụtara onye nketa nke ihe niile, onye sitekwara n'aka ya kee ụwa.. 3 Ọ bụ nchapụta nke ebube Chineke na akara zuru oke nke okike ya, na -ejikwa okwu ike ya na -akwado eluigwe na ụwa. Mgbe ọ sachara mmehie, ọ nọdụrụ ala n'aka nri nke ịdị elu nke ịdị elu, 4 ebe ọ dị elu karịa ndị mmụọ ozi dịka aha o ketara dị mma karịa nke ha.
Ndị Hibru 2:5
5 n'ihi na ọ bụghị ndị mmụọ ozi ka Chineke doro ụwa nke na -abịa, nke anyị na -ekwu maka ya.
Ndị Kọlọsi 1:18
18 Ọ bụkwa ya bụ isi nke ahụ ahụ, bụ ụka. Ọ bụ mmalite, ọkpara site na ndi nwuru anwu, ka ọ we buru onye mbu n'ihe nile.
36 Ya mere, ka ụlọ Izrel dum mara nke ọma Chineke mere ka ọ bụrụ Onyenwe anyị na Kraịst ahụ, Jizọs a nke unu kpọgidere n'obe. "
1 Ndị Kọrịnt 8:6
6 maka anyị e nwere otu Chineke, Nna, onye ihe niile sitere na ya na onye anyị bụ maka ya, na otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst, onye ihe niile sitere n'aka ya na onye anyị sitere n'aka ya..
3 Na tndụ ebighị ebi ya bụ, ka ha mara gị, onye naanị ya bụ ezi Chineke, matakwa onye i zitere Jizọs Kraịst
Chineke hụrụ ụwa n'anya nke ukwuu nke na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighi ebi. (Jọn 3:16) N'ihi na Chineke eziteghị Ọkpara ya n'ụwa ka ọ maa ụwa ikpe, kama ka e wee site n'aka ya zọpụta ụwa. (Jọn 3:17) A gaghị ama onye ọ bụla kwere na ya ikpe, ma onye na -ekweghị, a marala ya ikpe ugbu a, n'ihi na o kweghị n'aha nke Ọkpara Chineke mụrụ naanị ya. (John 3:18) Ete ama Eyen onyụn̄ ayak kpukpru n̄kpọ esịn enye ke ubọk. Onye kwere n'Ọkpara ahụ nwere ndụ ebighi ebi; onye ọ bụla nke na -adịghị erubere Ọkpara ahụ isi agaghị ahụ ndụ, kama iwe Chineke na -adịgide n'ahụ ya. (Jọn 3: 35-36) Nna ahụ enyela ya ikike n'elu anụ ahụ niile, inye ndị niile Chineke nyere ya ndụ ebighi ebi. (Jọn 17: 1-2) Nke a bụ ndụ ebighi ebi, ka ha mara onye naanị ya bụ ezi Chineke, marakwa Jizọs Kraịst onye o zitere. (Jọn 17: 3) Dị ka Jizọs kwuru, "Nke a bụ uche Nna m, na onye ọ bụla nke na -ahụ Ọkpara ahụ wee nwee okwukwe na ya ga -enwe ndụ ebighi ebi, m ga -akpọlitekwa ya n'ụbọchị ikpeazụ." (Jọn 6:40) Oge awa na -abịa, ọ dịkwa ugbu a, mgbe ndị nwụrụ anwụ ga -anụ olu Ọkpara Chineke, ndị nụrụ ya ga -adịkwa ndụ. (Jọn 5:25) N'ihi na dị ka Nna nwere ndụ n'ime onwe ya, otu a ka o nyekwara Ọkpara ahụ inwe ndụ n'ime onwe ya - O nyekwara ya ikike ikpe ikpe, n'ihi na ọ bụ Nwa nke mmadụ. (Jọn 5: 26-27)
O mezuru ihe Chineke buru n'amụma site n'ọnụ ndị amụma niile, na Kraịst ya ga -ata ahụhụ. (Ọrụ 3:18) Ya mere, chegharịanụ, chigharịa, ka e wee hichapụ mmehie unu, ka oge izu ike wee si n'ihu Onyenwe anyị bịa, ka o wee ziga Kraịst ahụ a họpụtara maka unu, Jizọs, onye eluigwe ga -emerịrị. nata ruo oge iweghachi ihe niile nke Chineke kwuru site n'ọnụ ndị amụma ya dị nsọ ogologo oge gara aga. (Ọrụ 3: 19-21) Jizọs sịrị, “Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso m n'azụ, ya jụ onwe ya ma bulie obe ya kwa ụbọchị wee soro m. N'ihi na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga -atụfu ya, ma onye ọ bụla tụfuru ndụ ya n'ihi m ga -azọpụta ya. N'ihi na olee uru ọ baara mmadụ ma ọ bụrụ na ọ nweta ụwa niile wee tufuo ma ọ bụ tụfuo onwe ya? N'ihi na onye ọ bụla ihere m na okwu m na -eme, ihere onye ahụ nke Nwa nke mmadụ ga -eme ya mgbe ọ ga -abịa n'ebube ya na ebube nke Nna ya na nke ndị mmụọ ozi dị nsọ. " (Luk 9: 23-26)
Chineke mere ya ka ọ bụrụ Onyenwe anyị na Kraịst, Jizọs nke a kpọgidere n'obe. (Ọrụ 2:36) Chineke nke Abraham, Chineke nke Aịzik, na Chineke nke Jekọb, Chineke nke nna nna anyị ha, nyere ohu ya Jizọs otuto. (Ọrụ 3:13) Chineke nke ndị nna ochie kpọlitere Jizọs wee bulie ya n'aka nri ya dị ka onye ndu na onye nzọpụta, inye nchegharị na mgbaghara mmehie. (Ọrụ 5: 30-31) Anyị niile ga-echegharị ka e mee anyị baptizim n'aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara nke mmehie anyị iji nata onyinye nke Mmụọ Nsọ. (Ọrụ 2:38) Nkwa ahụ dịịrị gị na ụmụ gị yana maka ndị niile nọ ebe dị anya, onye ọ bụla nke Jehova bụ Chineke anyị na -akpọ onwe ya. (Ọrụ 2:39) Jizọs bụ Kraịst ahụ, onye na -eji mmụọ nsọ na ọkụ eme baptizim. (Luk 3:16) Ndụdụ afụcha ọka ya dị n'aka ya, iji kpochapụ ebe nzọcha mkpụrụ ya na ịchịkọta ọka ya n'ọba ya, mana ọ ga -eji ọkụ na -adịghị anyụ anyụ gbaa igbogbo ya. (Luk 3: 16-17)
Jọn 3: 16-18
16 "N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na Ọ nyere ọbuná Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi -ebi. 17 N'ihi na Chineke eziteghị Ọkpara ya n'ụwa ka ọ maa ụwa ikpe, kama ka e wee site n'aka ya zọpụta ụwa. 18 A gaghị ama onye ọ bụla nke kwere na ya ikpe;.
Jọn 3: 35-36
35 Nna m hụrụ Ọkpara ya n'anya ma nyefee ihe niile n'aka ya. 36 Onye kwere n'Ọkpara ahụ nwere ndụ ebighi ebi; onye ọ bụla nke na -adịghị erubere Ọkpara ahụ isi agaghị ahụ ndụ, kama iwe Chineke na -adịgide n'ahụ ya.
Jọn 17: 1-3
Na1 Mgbe Jizọs kwuchara okwu ndị a, o welie anya ya lee eluigwe, sị, “Nna, oge awa ahụ eruola; nye Ọkpara gị otuto ka Ọkpara ahụ wee nye gị otuto, 2 ebe I nyere ya ikike n'ebe anụ ahụ niile nọ, inye ndị niile I nyere ya ndụ ebighi ebi. 3 Ma nka bu ndu ebighi -ebi, ka ha mara Gi, Nke nání Gi bu ezi Chineke, mara kwa Onye I zitere, bú Jisus Kraist.
40 N'ihi na nke a bụ uche Nna m, na onye ọ bụla nke na -ahụ Ọkpara ahụ wee nwee okwukwe na ya ga -enwe ndụ ebighi ebi, m ga -akpọlitekwa ya n'ụbọchị ikpeazụ.. "
Jọn 5: 25-27
25 N'ezie, n'ezie, ana m asị unu, oge awa na -abịa, ọ dịkwa ugbu a. mgbe ndị nwụrụ anwụ ga -anụ olu Ọkpara Chineke, ndị nụrụ ya ga -adịkwa ndụ. 26 N'ihi na dika Nnam nwere ndu nime onwe -ya, otú a ka O nye -kwa -ra Ọkpara -Ya inwe ndu nime Onwe -ya. 27 O nyewokwa ya ikike ikpe ikpe, n'ihi na ọ bụ Nwa nke mmadụ.
Ọrụ 3: 18-21
18 ma O mezuru otu ahụ ihe Chineke buru n'amụma site n'ọnụ ndị amụma niile, na Kraịst ya ga -ata ahụhụ. 19 Ya mere, chègharianu, chigharia, ka ehichapu nmehie nile unu, 20 ka oge inye ume wee si n'ihu Onye -nwe bịa, na ka o wee ziga Kraịst ahụ a họpụtara maka gị, Jizọs, 21 bụ onye eluigwe ga-enwerịrị ruo mgbe ọ ga-eweghachite ihe niile Chineke kwuru site n'ọnụ ndị amụma ya dị nsọ ogologo oge gara aga.
(Gụọ Luk 9: 23-26.)
23 O wee sị mmadụ niile, “Ọ bụrụ na onye ọ bụla ga -eso m, ya jụ onwe ya ma bulie obe ya kwa ụbọchị wee soro m. 24 N'ihi na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga -atụfu ya, ma onye ọ bụla tụfuru ndụ ya n'ihi m ga -azọpụta ya. 25 N'ihi na olee uru ọ na-abara mmadụ ma ọ bụrụ na o rite ụwa dum n'uru ma tụfuo onwe ya? 26 N'ihi na onye ọ bụla ihere m na okwu m na -eme, ihere onye ahụ ga -eme Nwa nke mmadụ mgbe ọ ga -abịa n'ebube ya na ebube nke Nna ya na nke ndị mmụọ ozi dị nsọ..
Ọrụ Ndị Ozi 3: 13 (NIV)
13 Chineke nke Abraham, na Chineke nke Aisak, na Chineke nke Jekob, na Chineke nke nna nna anyi, toro ohu ya Jisos otutoOnye unu nyefere n'aka Paịlet, mgbe o kpebiri ịtọhapụ ya.
Ọrụ 5: 30-31
30 Chineke nna -ayi -hà mere ka Jisus si n'ọnwu bilie, Onye unu onwe -unu b byuru, nākwuba Ya n'elu osisi. 31 Chineke buliri ya elu n'aka nri ya ka ọ bụrụ onye ndu na onye nzọpụta, inye Israel nchegharị na mgbaghara mmehie.
Ọrụ 2: 38-39
38 Ma Pita sịrị ha,Chegharịanụ ka e meekwa onye ọ bụla n'ime unu baptizim n'aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara mmehie unu, unu ga -anatakwa onyinye nke Mmụọ Nsọ.. 39 N'ihi na nkwa dịịrị gị na ụmụ gị na ndị niile nọ ebe dị anya, onye ọ bụla Onye -nwe Chineke anyị kpọrọ onwe ya. "